Iflethi entle yomzuzu omnye ukusuka e-Piazza Erbe
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGiuseppe
Ifulethi elinefenitshala elungileyo, kwindawo ezolileyo nenoxolo (enetrafikhi encinci), amanyathelo ambalwa ukusuka kumanqaku aphambili anomdla esixekweni. Ibonelela ngebalcony emnandi ejonge kwintendelezo eqhelekileyo yangaphakathi, ilungele isidlo sakusasa sothando.
Iflethi entle kwaye ixhotyiswe kakuhle, ibekwe kwindawo ezolileyo (indawo enothintelo lwezithuthi), ikufutshane kakhulu kwezona ndawo zidumileyo zembali. Inebalcony ethandekayo, ejonge kwintendelezo eqhelekileyo yangaphakathi, ilungele isidlo sakusasa sothando.
Indawo ekujulwa kuyo ilitye ukusuka ePiazza Erbe iyenza ifaneleke njengendawo ephambili yokuya kwiiholide zakho. Ifanelekile kwiintsapho zabantu aba-4
4.74 ·Izimvo eziyi-451
4.74 · Izimvo eziyi-451
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi451
Le ndlu ibekwe entliziyweni yeVerona yakudala, indawo yokuphosa ilitye ukusuka ePiazza Erbe, inqaba yaseLamberti, indlu kaJuliet kunye nokuhamba imizuzu embalwa ukusuka ePiazza Bra Arena. Lilungelo lokuqala ukuntywila kwindawo yamanye amaxesha, phakathi kweengcango ezindala kunye neebhalkhoni, uhamba phakathi kweethaveni kunye neendawo eziqhelekileyo.